12 Aug, 2020 - 00:08	 2020-08-12T00:07:06+00:00 2020-08-12T00:08:06+00:00 0 Views
Mutevedzeri wegurukota redzidzo yepuraimari nesekondari, Cde Edgar Moyo vanoti mamiriro ezvinhu haasati ave kutendera kuti vazivise kuti zvikoro zvichavhurwa riinhi.
Hurumende, zvisinei inoti iri mushishi yekuona kuti midziyo inodiwa mukudzivirira kupararira kweCovid-19 muzvikoro semamask yavepo.
“Sebazi, tiri kuramba tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro kuburikidza nekuunganidza zvinhu zvinoshandiswa mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi uye kuvandudza mabhuku ezvidzidzo.
“Tange tichivandudza zvakare zvidzidzo zveparedhiyo. Kunharaunda dzisingakwanise kuwana masaisai eredhiyo, tiri mushishi yekuona kuti pave nemabhuku anoenderana nezvidzidzo zveparedhiyo izvi,” vanodaro.
Cde Moyo vanoenderera mberi vachiti, “Panyaya yebvunzo dzemunaChikumi, vakawanda vari kunyora vadzidzi vakazvimirira asi dzemunaMbudzi, tine vadzidzi vemuzvikoro nekudaro vanofanira kugara vakagadzirira kudzinyora.